Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo xustay Maalinta falaxalka Aduunka. – Ministry of Education in Puntland
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo xustay Maalinta falaxalka Aduunka.
By editor	/ October 15, 2017
15/10/ 2017- Xuska Munaasabadaan ayaa waxaa iska kaashaday Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland iyo Hay,adaha World vision,Unicef,NRC iyo Nero.
Munaasabada oo ahayd Wacyigalin ayaa hal ku dhiga sanadkaan waxaa uu ahaa our Hands our Future waxaana si weyn looga hadlay muhiimada ay Nadaafadu u leedahay aadanaha.
Maamulaha Schoolka Maxamuud Aw Cismaan Axmed Cabdi Cilmi ayaa ardayda ugu baaqay inay ilaaliyaan Nadaafada kuna dadaalaan Marwalba farodhaqashada si loo ilaaliyo Caafimaadka.
15-ka October waxaa loo asteeyey maalinta Nadaafada aduunka gaar ahaan Faradhaqa waxaana Munaasabad lagu dhiiragalinayo faradhaqashada lagu qabta Schoolka Maxamuud Awcismaan ee magaalada Garoowe.
Cabdishugri Maxamed Faarax oo ah Madaxa Washka ee wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha horumarinta waxbarashada Maxamuud Cabdisalaan ayaa ka hadlay muhiimada ay nadaafadu leedahay gaar ahaan faradhaqashada,waxaa ay sheegeen inay muhiim tahay in faraha la dhaqdo marka la seexanayo aman la soo toosayo.
Sidookale waxaa ay sheegeen inay Muhiim taha in faraha la dhaqo xiliyada isticmaalka Suuliga,Cunto cunida kadib iyo ka hor si loo ilaaliyo Nadaafada shaqsiga iyo deegaanka.
Xafso Maxamuud Siciid oo Wash cordinater-ka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland ayaa si toos ah ardayda ugu samaysay Paratical faradhaqashada iyadoo ardayduna ay si toos ah u sameeyeen.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada Puntland Maxamed Cabdulqaadir Cismaan ayaa ardayda iyo shacabka ugu baaqay inay Nadaafada dhowraan gaar ahaan Faradhaqa waxaana uu sheegay in wasaaradu ay casharo ku saabsan Nadaafada ay ku bixiso Schoolada Puntland.